Alohan'ny hiatrehanao ny toerana fialantsasatra: miantsena sy misakafo any amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt!
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Alohan'ny hiatrehanao ny toerana fialantsasatra: miantsena sy misakafo any amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt!
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fivarotana sy trano fisakafoanana maro no misokatra indray ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt - Manome anao tsiro an'i Italia ny “Pezzo di Pane” an'i Tim Mälzer.
Betsaka ny tolotra manintona ao amin'ny FRA, manomboka amin'ny marika Alemana sy iraisam-pirenena ka hatramin'ny fivarotana sy trano fisakafoanana tarihin'ireo tompona eo an-toerana.
Ny marika misy an'i Boss, Falke, Llyod, ary Gant dia miantso fihenam-bidy amin'ny fahavaratra sy topy maso amin'ireo fanangonana ririnina vaovao.
Hahita vokatra tsara tarehy be dia be ao amin'ny fivarotana Duty Free vaovao nosokafan'ny Airport Airport GmbH & Co. KG any amin'ny faritra fitaterana tsy Schengen any Pier B ao amin'ny Terminal 1 ianao.
Tongasoa eto Seranam-piaramanidina Frankfurt! Betsaka ny olona maniry fatratra ny hivezivezy indray, ary mihanaka ny volan'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina vokatr'izany. Fivarotana sy hotely fisakafoanana maro no misokatra ihany koa hanompo azy ireo, ary ho vonona handray anao amin'ny Terminal 1 sy 2 ara-potoana amin'ny fanombohana ny fialantsasatry ny sekoly fahavaratra any amin'ny fanjakan'i Hesse Alemanina amin'ny 16 Jolay.
“Farany dia afaka manolotra ny valan-tseranana ho an'ny mpandeha izahay indray,” hoy i Anke Giesen, mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka ao Fraport AG izay tompon'andraikitra amin'ny varotra sy trano. “Miaraka miverina tsikelikely amin'ny ara-dalàna isika aorian'ny fihenan'ny areti-mandringana. Ary manana ny antony rehetra hijerena ny fanantenana isika. ”
Betsaka ny tolotra manintona ao amin'ny FRA, manomboka amin'ny marika Alemana sy iraisam-pirenena ka hatramin'ny fivarotana sy trano fisakafoanana tarihin'ireo tompona eo an-toerana. Ao amin'ny Terminal 1, ny mpandeha sy ny mpitsidika dia afaka mitsidika ny "Shopping Boulevard" sy "Shopping Avenue". Ny marika misy an'i Boss, Falke, Llyod, ary Gant dia miantso fihenam-bidy amin'ny fahavaratra sy topy maso amin'ireo fanangonana ririnina vaovao. Azonao atao ihany koa ny mandeha mankany amin'ny fivarotana iray momba ny Travel Value and Duty Free izay nisokatra vao haingana mba hahita menaka manitra mahafinaritra na fanomezana ho an'ny olon-tianao ao an-trano, na misy vokatra hafa manintona hafa.
Ahoana ny macchiato latte matsiro alohan'ny hiaingany? Ny ekipan'ny kafe sy trano fisakafoanana 80 eo ho eo dia faly faly manompo vahiny indray. Raha te hisakafo ao anaty trano fisakafoanana ianao dia mila manaporofo fa vaksinina feno na sitrana ianao na vao avy nanandrana ny ratsy. Na izany aza, ny sakafo sy ny zava-pisotro rehetra dia azo baikoina ihany koa mba halaina. Ny Food Plaza eo amin'ny haavon'ny Terminal 2 dia manolotra fahitana mahatalanjona ho an'ny vahiny amin'ny hetsika eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny zorony amin'ny seranam-piaramanidina.